Maxay Soomaalida Kenya uga biya-diideen natiijadii tirakoobka. | Somaliland Mirror
Home WARARKA Maxay Soomaalida Kenya uga biya-diideen natiijadii tirakoobka.
Maxay Soomaalida Kenya uga biya-diideen natiijadii tirakoobka.
Dalka Kenya waxaa la soo saaray dhawaan natiijada tirakoobkii dalkaasi laga sameeyay,waxaana arrintan ka dhashay muran iyada oo ay jiraan qaar ka mid ah qoomiyadaha oo dareemaya in natiijada ay tahay mid aan sax ahay islamarkana aanay xaq ahayn.
Sida ku cad natiijada tirakoobka waxaa dalka Kenya imika ku nool shacab gaaraya 47.6 milyan , taasi oo micnaheedo tahay in tan iyo 2009-kii ay tirada ku darsantay 9 milyan.
Balse qaar ka mid ah gobolada ayaa waxaa hoos u sii dhacday tirada dadka ku noolaa.
Nitiijadan ayaa waxaa ka dhalan kara muran, sababtoo ah tirada shacabka ku nool gobolada kala duwan ayaa ah mid muhim u ah dhaqaalaha ay dowladda ka helayaan .
Maxay muhim u tahay tirada bulshada?
Bulshada Kenya ayaa ka kooban qowmiyado kala duwan taasi oo sidoo kale ku qotanta xisbiyada siyaasada ku tartama.
Dowladda wali ma aysan soo saarin dhammaan macluumaadka qowmiyadaha la xiriira,balse isbadalada tirada gobolada qaar ayaa waxaa durba ka dhashay muran.
Natiijada ka soo baxda tirakoobka noocan ah ayaa wiiqi karta rabitaanka qaar ka mid ah qowmiyada ee dhanka matalaadda iyo kheyraadka.
Mid ka mid ah deegaanadasi waa gobolka ay Soomaalida degto ee Waqooyi Bari ,waxay natiijadu muujinaysaa in tirada shacabka ay hoos u dhacday taasi oo sababtay inay su’aal ka keenaan hogaamiyayaasha deegaanadaas oo doonaya in dhaqaalihii la siin jiray uu sidii hore sii ahaado.
Tirada ayaa sidoo kale muujinaysa isu dheeli tirnaan la’aan dhanka jinsiyada ah taasi oo ah in raggu ay ka badan yihiin haweenka.
‘Halis soo wajahday’ qaxootiga Itoobiya ee Geeska Afrika
Maxay ka cabanayaan Ganacsatada qaadka ee Puntland?
Farmaajo oo go’aankiisa ku aadan kiiska Badda u sheegay Qaramada Midoobey
“Macluumaadkan la soo saaray toddobadkan waa been abuur mana aha mid ku qotama u jeedooyiin,” ayuu yiri Adan Bare Ducaale, oo ah hogaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka Kenya.
Waxaa uu ku dooday in ragga Soomaalida ay guursadaan wax ka badan hal xaas islamarkana la filayay in tirada dumarka ay aa u sareyso.
Waaxda keydinta macluumaadka bulshada ee Kenya ayaa dhankooda difaacay sax ahanshiyaha natiijada ka soo baxday tirakoobkii la sameeyay.
Muxuu yahay tirakoob qaabkee se u shaqeeyaa?
Tirakoob waa geedi socod ay dowladda ku uruuriso macluumaadka dadkeeda .
Waxaa ka mid ah macluumaadka la qaadayo tirada ku nool guri walba,diinta iyo qowmiyadda uu qofka ka so jeedo,waxaana la qabtaa 10kii sanaba mar.
Image captionHaweenay samaynaysa tirakoobka
Qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa ka gudbay in tirakoobka la sameeyo iyada oo warqado iyo qalin la adeeegsanayo waxaana taa badalkeeda ay u gudbeen qaabka casriga ah oo ay dadka macluumaadkooda ku buuxiyaan foomam internetka ah.
Dalka Kenya ayaa waxaa tirakoobka fuliyaa saraakiil guri guri u booqanaya islamarkana macluumaaka ka qoraya dadwaynaha.
In macluumaadka la uruuriyo ayaa mararka qaar ah mid adag islamarkana bulshooyiinka qaar ayaan dowladda ku aaminayn in ay siiyaan macluumaakooda shiqsiga ah.
Qaabkee dowladda u isticmaalaysaa macluumaadka?
Natiijada ka soo baxda tirakoobka ayaa saamayn ku yeelan karta muwaadiniinta dalka ku nool guud ahaan.
Dalka Kenya kheyraadka laguma qeybsado tirada ku nool gobolada oo kali ah balse sidoo kale waxay tirada go’aan ka gaartaa xadeynta deegaanada iyo sameynta deegaan baarlamaaneed cusub.
Image captionDalka Lubnaan muddo dhan toboneeyo sano lama qaban tirokoobka qaranka.
Mar walba oo uu dal kala qeybsan yahay waxaa sii badanaya muranka la xiriira tirakoobyada.
Dalka Itoobiya ayaa labo mar dib loo dhigay tirakoobka tan iyo 2017 sababtoo ah dibadbaxyo iyo xiisado u dhaxeeya qowmiyadaha.
Dalka Nigeria ayaa isna leh taariikh dheer oo ah muran dhanka tirakoobka waxaana lagu waday in tirakoobka la qabto 2016, balse dhaqaalo la’aan iyo sababo dhanka tasiilaadka ah ayaa dib loogu dhigay.
Dalka Lubnaan muddo dhan toboneeyo sano lama qaban tirokoobka qaranka.
Previous PostMaxkamad Ku Taal Hindiya Oo Amartay in Dhul uu ku yaallay Misaajid lagu Wareejiyo Hinduuda. Next PostMadaxwaynihii hore ee Barazil Lula da Silva oo xabsiga laga siidaayay.